“Ant-Man and the Wasp” ဇာတ်ကားမှာပါဝင်မယ့် Hyundai ရဲ့ 2019 Veloster! – AutoMyanmar
“Ant-Man and the Wasp” ဇာတ်ကားမှာပါဝင်မယ့် Hyundai ရဲ့ 2019 Veloster!
မကြာခင်ထွက်ရှိမယ့် “Ant-Man and the Wasp” မှာတော့ Hyundai ရဲ့ Model အသစ်ဖြစ်ပြီး ဒီဇိုင်းရော၊ အရည်အသွေးရောကောင်းမွန်တဲ့ 2019 Veloster ဟာပါဝင်တော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
Ant-Man ဟာ Marvel Studio ရဲ့လူကြိုက်များ character ဖြစ်ပြီး ၂၀၁၅ ခုနှစ်မှာထွက်ရှိထားတဲ့ “The Ant-Man” ဇာတ်ကားမှာ တည်းက ကျွန်တော်တို့စတင် မြင်တွေ့ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၆ ရဲ့ “Captain America : Civil War” မှာလည်းထပ်မံမြင်တွေ့ခဲ့ရပါသေးတယ်။ မေလမှာထွက်ရှိမယ့် “Avengers : Infinity War” မှာ Ant-Man ကိုမြင်တွေ့ရဉီးမှာပါ (Trailer မှာမပါဝင်လို့မသေချာ)။ Infinity War ပြီးရင်တော့ ဇူလိုင်လ မှာထွက်ရှိမယ့် “Ant-Man and the Wasp” မှာမြင်တွေ့ရတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
Ant-Man ဝတ်စုံမဝတ်ခင်ရန်သူ တွေလိုက်တဲ့အခန်းတို့၊ ကားကိုအရှိန်ပြင်းပြင်းနဲ့မောင်းတဲ့အခန်းတွေမှာ 2019 Veloster ရဲ့စွမ်းရည်တွေကိုသိရှိနိုင် မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါတွေကတော့ 2019 Veloster ရဲ့စွမ်းရည်ကို သိရှိနိုင်မယ့် ကျွန်တော့်ရဲ့ ခန့်မှန်းခြေဇာတ်ဝင်ခန်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ Veloster ရဲ့ အရွယ်အစားကတော့ အနည်းငယ်သေးပါတယ်။ “Size doesn’t matter” ဆိုတဲ့စကားအတိုင်းပါပဲ၊ ကျွန်တော်တို့အဓိကကြည့်ရမှာက Veloster ဘယ်လောက်အထိစွမ်းဆောင်နိုင်လဲဆိုတာပါ။
ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး Hyundai Motor America ရဲ့တာဝန်ရှိသူတစ်ဉီးဖြစ်သူ Dean Evans ရဲ့ပြောကြားချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ Dean Evans ကတော့ Hyundai Motor America ရဲ့ Chief Marketing Officer ပါ။
“This film isaroller coaster ride from start to finish that will encourage viewers to see their worlds throughamore adventurous, action-packed lens,” said Mindy Hamilton, Marvel’s SVP of Global Partnerships & Marketing.
အပေါ်မှာဖော်ပြထားတာကတော့ “Ant-Man and the Wasp” ဇာတ်လမ်းကိုဘယ်လိုခံစားမရလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကို Marvel Studio ကတာဝန်ရှိသူဖြစ်တဲ့ Mindy Hamilton ရဲ့ပြောကြားချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ Mindy Hamilton ကတော့ Marvel ရဲ့ Global Partnerships & Marketing အပိုင်းက Senior Vice President တစ်ဉီးပါ။
ဒီသတင်းကတော့ Hyundai ကိုကြိုက်နှစ်သက်သူ အတွက်သတင်းကောင်းတစ်ခုလို့ဆိုရမှာပါ။ ၂၀၁၉ Veloster ရဲ့အမိုက်စား performance တွေကို “Ant-Man and the Wasp” မှာမကြာခင်တွေ့မြင်ရတော့မှာဖြစ်တာကြောင့် ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လည်း စောင့်ကြည့်နေရမှာဖြစ်ပါတယ်။